AIRBNB na-ekwu maka mkpebi Courtlọikpe Kasị Elu na mmachibido iwu njem US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » AIRBNB na-ekwu maka mkpebi Courtlọikpe Kasị Elu na mmachibido iwu njem US
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • Akụkọ kacha ọhụrụ na Libya • News • Akụkọ North Korea na -agbasa • ndị mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Somalia • Akụkọ na -agbasa Syria • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Venezuela
Taa, Courtlọikpe Kasị Elu nke United States kpebiri ịkwado mmachibido iwu njem nke usoro nchịkwa Trump mere. Mmachibido iwu ahụ machibidoro ụmụ amaala si Iran, Libya, Somalia, Syria, Venezuela, na ọbụna “onye kachasị ọhụụ” America nke North Korea, ịbanye na United States.
Nke a bụ ụdị nke atọ nke mmachibido iwu njem site na mmalite ya na mgbe ọ gachara ụlọ ikpe dị iche iche. Na mbu, ndị nkatọ kpọrọ ụdị nke gara aga mmachi mgbochi njem ndị Alakụba, agbanyeghị, ugbu a ha ga-echegharị aha ahụ ugbu a na mmachibido iwu ahụ gụnyere Venezuela na North Korea. Mba ndị akpọrọ aha nọ na ndepụta ahụ n'ihi na ndị isi nchịkwa na-ekwu na ha bụ egwu egwu ma ọ bụ na-akwadoghị US.
Airbnb Co-founders, Brian Chesky, Joe Gebbia, na Nathan Blecharczyk, nwere nke a iji kwuo banyere ụdị mmachibido iwu kachasị nso na mkpebi thelọikpe Kasị Elu ịkwado ya:
Obi adịghị anyị mma na ihe a Courtlọikpe a kpebiri. Mmachibido iwu njem ahụ bụ amụma megidere ozi na ụkpụrụ anyị - igbochi njem dabere na obodo mmadụ ma ọ bụ okpukpe ya dị njọ.
Ma ọ bụ ezie na akụkọ taa bụ nlọghachi azụ, anyị ga-anọgide na-alụ ọgụ na otu ndị na-enyere ndị ahụ metụtara aka. Airbnb ga - adaba na onyinye na International Assistance Assistance Project (IRAP) ruo ngụkọta nke $ 150,000 site na Septemba 30, 2018 iji kwado ọrụ ha na-akwado maka mgbanwe usoro yana ụzọ iwu maka ndị mmachi njem ahụ metụtara. Ọ bụrụ n’ịchọrọ isonyere anyị, ị nwere ike nye onyinye ebe a.
Anyị kwenyere na njem bụ mgbanwe na ike dị ike yana iwulite njikọta n'etiti ọdịbendị na obodo na -emepụta ụwa ọhụrụ, mmekọrịta na mmụọ nsọ. Na Airbnb, anyị nwere ekele nke ukwuu maka obodo anyị ga-anọgide na-emeghe ọnụ ụzọ gburugburu ụwa ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu.